Blog-Tipping: နည်းပညာယားယံခြင်း Martech Zone
ဘလော့ဂ်တင်ခြင်းအတွက်စာရင်းနောက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်မှတ်ချက်တစ်ခုထပ်ထည့်သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာယားယံ။ မည်သူမျှဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်မှတ်ချက်များ၏တန်ဖိုးကိုလျှော့မတွက်သင့်ပါ (အချို့ကဘလော့ဂ်သည်ထင်မြင်ချက်များမရှိပဲဘလော့ဂ်မဟုတ်ဟုဆိုကြသည်)
Technical Itch သည်၎င်း၏ပထမဆုံးမွေးနေ့ကိုကျင်းပနေသည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ် !!!
columnar အပြင်အဆင်ဖြင့်သင်၏အကြောင်းအရာ div ကိုသင်၏ html တွင်နေရာချရန်သေချာပါစေ (တည်နေရာသည်ဗဟိုအကြောင်းအရာဒေသအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စာမျက်နှာ၏အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကိုအညွှန်းမပြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘယ်ဘက် sidebar html ကို content html မတိုင်မီထားခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏ content ထက် sidebar တွင်သာရည်ညွှန်းခံရလိမ့်မည်။
သင်၏ Blog ခေါင်းစဉ်အတွက်ဂရပ်ဖစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည် - သို့သော် Search Engines တွားသွားနိုင်သည့်စာသားများရှိနေရန်သေချာစေပါ။ ဖတ်ရှုဖို့သေချာပါစေ ဂူးဂဲလ်ဘလော့ဂ်အတွက်တင်ပေးတဲ့အမှတ် ၂။ သင်၏ဘလော့ဂ်နာမည်နှင့်ခေါင်းစဉ်ခွဲများပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သော html နှင့်စတိုင် tag များဖော်ပြထားသည်။
စာမျက်နှာ၏အပိုင်းများလေလေစာဖတ်သူမှ ပို၍ ဆွဲဆောင်လေလေဖြစ်သည်။ ကော်လံများအကြားအရောင်ကွာခြားမှုအနည်းငယ်ရှိခြင်းကလူတို့အားကော်လံများဖတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေလိမ့်မည်။ အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းအရာသည်အပေါ့ဆုံးဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ထိုအကြောင်းအရာကိုအာရုံစိုက်စေလိမ့်မည်။ sidebar နဲ့ page background shading ကိုနည်းနည်းလေးတောင်စမ်းသပ်မယ်ထင်တယ်။ ၎င်းသည်တိုင်းတာနိုင်သောအရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ဤထင်မြင်ချက်ကိုပေးသောဝက်ဘ်ဆိုက်ဖတ်ခြင်းအလေ့အထများကိုလေ့လာမှုများစွာရှိသည်။
ရှေးရှေးအများစုက၎င်းကိုမသိရှိကြသော်လည်းအခြား site တစ်ခုမှဆွဲထုတ်ထားသော widget များနှင့်ပုံစံများကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အသုံးပြုနေသော layout နှင့် class tags များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သာဖြစ်သည်။ ငါသုံးတယ် FireBug Firefox ကသူတို့ဘယ်လိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါ၊ ပြီးတော့ကျွန်တော့် styleheet ထဲမှာ tags နဲ့ style တွေကိုထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
သင်၏ဖောင့်များ၏အရောင် (# 4c8ac9) သည်အပြာရောင်အရိပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏စာမူခေါင်းစဉ်နှင့်စာမျက်နှာ၏ကျန်စာမျက်နှာများတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်လင့်ခ်တစ်ခုနှင့်အခြားတစ်ခုကိုကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိပါ။ သငျသညျကဲ့သို့သော tool ကိုအသုံးချနိုင်ပါတယ် Kuler complimentary အရောင်များနှင့်အရိပ်ကိုရှာဖွေရန်။ ဒီမှာမင်းအတွက်တစ်ခုရှိတယ် (# 234F7D) သင်၏အပြာရောင်အရိပ်ထက်အနည်းငယ်မှောင်နေသော်လည်းကောင်းစွာချီးမွမ်းသည်။ Kuler ကို အသုံးပြု၍ 'Create' ကိုရွေးပြီးအလယ်အရောင် HEX ပမာဏကိုသတ်မှတ်ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သူတို့၏အကြံပြုချက်များနှင့်အတူပတ်ပတ်လည်ကစားသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ tools တွေကိုသုံးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျစတင်တခါဒါဟာပျော်စရာပါပဲ။
ဒါကဒီ Tipping ဘို့ပဲ! ငါ့ကိုသင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်, နည်းပညာ Itch သို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဤ blog သည် Gadget fixation၊ Linux ကိုချစ်မြတ်နိုးသူများသို့မဟုတ်သူတို့၏ဘလော့ဂ်ကိုလှည့်စားခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုသူများအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။
Tags: Blog တင်ရန်Blog အကြံပေးချက်များနည်းပညာဆိုင်ရာယားယံ
IDT @ engtech
14:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 57
ဘလော့ဂ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်၏စီးရီးအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တကယ်နှစ်သက်ပါ၏ Doug ။
14:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 46
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဤမျှလောက်, engtech! မူရင်းအကြောင်းအရာနှင့်အတူလာရန်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်နက်ရှိုင်းစွာတူးဆွပြီးလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 07
သင်အမှန်တကယ်ကောင်းသောအချက်များကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်။ အရင်ကဖောင့်ဒါမှမဟုတ်နောက်ခံအရောင်တွေကိုကျွန်တော်မစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ ငါဒီသို့ကြည့်ပါလိမ့်မယ်
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 18
သင်လောင်း! ထိုအ - ဟုတ်ကဲ့ - ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအပေါ်ပြန် post ။